Ny Affinity Designer sy ny sary dia havaozina amin'ny fanatsarana maro | Famoronana an-tserasera
Nahazo fanavaozana lehibe ny Affinity Designer sy ny Affinity Photo ho an'ny programa roa izay lasa tena fanoloana Adobe Illustrator sy Adobe Photoshop. Tsy ela akory izay dia niresaka momba ny safidy tsara indrindra amin'ny programa Adobe izahay.
Serif no nanambara ny fanavaozana lehibe indrindra ho an'ny fitaovana Designer sy Photo anao. Mandeha amin'ny fomba fanohanana ny HDR fotsiny izy ireo ary inona no ho fanatsarana fanatanterahana afaka miasa tsara kokoa amin'ireo fitaovana tsy mampino ireo.
By ny lalana adinonay ny rohy mankamin'io infographic io miaraka amin'ireo safidy hafa rehetra ho an'ny Adobe. Io no andiany 1.7 izay ilain'ny Affinity hanosehana ny zava-bitan'ny fampiharana azy amin'ny ambaratonga hafa noho ny fampidirana ny GPU hafainganana, ny fanohanana ireo mpanara-maso HDR ary ny rafitra fitantanana fitadidiana fitadidiana feno.
Ny tsara indrindra dia tonga amin'ny kinova Mac sy Windows ny fitaovana, toy ny kinova iPad ihany. Raha ny marina, ireo fampiharana roa ireo dia nohamarinina mba hiasa ny monitor XDR Apple Pro Display vaovao, toy ny nanatsara ny fahombiazan'ny Macs vaovao.
Ireo mpampiasa Windows no mila miandry kely dia afaka mankafy izy ireo fanafainganana fitaovana, na dia efa misy aza ny fitantanana fitadidiana vaovao.
Manokana, ao amin'ny Affinity Photo dia miresaka izahay amin'ireo fanatsarana ireo:
Masinina fanodinana RAW nohatsaraina ka haingana kokoa ny vidiny.
Masinina borosy nohatsaraina izay misy borosy vaovao.
Mode symmetry 32-way
Ny fanatsarana ny sary, ny tontonana vaovao, ary ny tontonana fanatsarana.
Mahazo Affinity Designer:
Fitaovana isometrika vaovao.
Afaka manisa ny endriny ankehitriny miaraka amina kapoka sy famenoana tsy voafetra.
Nohatsaraina ny ankamaroan'ny fitaovam-pako.
Fisafidianana maody lasso lehibe kokoa
Manoro hevitra an'izany izahay mandehana mamaky ny tranonkalany for fantaro ny vaovao rehetra momba ny fanavaozana lehibe avy amin'ny Affinity Photo and Designer.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ny Affinity Designer sy ny sary dia mahazo ny fanavaozana lehibe indrindra hatramin'izao
Ity no Mac Pro an'ny Apple vaovao